Ny Petronas Towers | Vaovao momba ny dia
Ny Tilikambo Petronas
Mariela Carril | | Kuala Lumpur, Inona no ho hita
Iray amin'ireo trano malaza indrindra eto Malaysia ny Petronas Towers. Mety tsy fantatrao ny anarany fa azo antoka fa efa hitanao imbetsaka ny mombamomba ny roa sy ny miray amin'ireo tilikambo roa avo ireo, tandindon'ny firenena fa koa ny maritrano maoderina.
Ny karazana antsika dia miavaka amin'ny faniriana hahatratra ny lanitra, ka eto dia iray amin'ireo trano ambony kanto indrindra eto an-tany. Aiza? Amin'ny Kuala Lumpur. Raha manapa-kevitra ny hitsidika an'io faritra an'izao tontolo izao ianao, ny eo an-tongony sy eo an-tendrony dia zavatra tsy tokony halainao.
Ao izy ireo Kuala Lumpur, renivohitr'i Malezia ary ny tanàna lehibe indrindra sy lehibe indrindra ao aminy. Sahabo ho 243 kilometatra toradroa ny velaran'ilay tanàna ary mponina efa ho 1.8 tapitrisa no mponina, tsy manisa ny manodidina ny manodidina azy izay misy olona valo tapitrisa mahery. Ny marina dia nitombo be dia be izy io ankehitriny ary iray amin'ireo fitomboana haingana indrindra any Azia.
Ny tilikambo dia iray amin'ireo trano avo indrindra eto an-tany ary nitazona an'io anaram-boninahitra io izy ireo nandritra ny enin-taona, teo anelanelan'ny 1998 sy 2004. Miakatra 452 metatra miala ny tany izy ireo. Ny tilikambo tsirairay dia milanja 300 taonina, mitovy amin'ny elefanta 43 XNUMX. Olona malaza izy ireo Mpanao mari-trano arzantina antsoina hoe César Pelli (tompon'andraikitra amin'ny World Financial Center any New York ihany koa) ary manana endrika endrika faran'izay lehibe.
Ny mpanao maritrano arzantina sy ny ekipany dia nanomboka tamin'ny tetik'asa tamin'ny fiandohan'ny taona 90 ary rehefa nitaky ny hamitana ny asa ao anatin'ny enin-taona ny governemanta dia orinasa roa nifanaraka no nifampiraharaha tamina tilikambo tsirairay, orinasa japoney iray ary orinasa koreana tatsimo. Tamin'izay dia natsangana tamin'ny farany ny lambam-baravarana talohan'ny fiandohan'ny taonjato. Misy ampahany miakatra amin'ny lanitra ary ny iray kosa milentika amin'ny tany, izay nilentika ny fanambanin'ireo tilikambo metatra maromaro, namadika azy ireo ho iray amin'ireo fototra lalina indrindra eto an-tany.
Mihazona mafy ny tany ilay rafitra noho ireo andry betonaly 104 izay nofantsihana tamin'ny halavany teo anelanelan'ny 60 sy 114 metatra, misy metatra toradroa an'arivony sy metatra toratelo. Miakatra ny tilikambo 88 rihana miakatra vita amin'ny beton, vy ary vera nohamafisina (tontonana vy tsy metaly 33 ary panneaux vera 55), izay manaraka lamina famolavolana Silamo mifanaraka amin'ny kolotsaina misy ny firenena ary mandika ho karazana teny filamatra: firaisan-kina ao anatin'ny firindrana , fitoniana sy fahaiza-mandanjalanja.
Ny Tilikambo Petronas nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 1999 ary mijoro eo amin'ilay tranonkala izy ireo izay nisy làlana fifaninanana soavaly tany am-boalohany. Momba izany rafitra mahay miaraka amin'ny rafitra informatika mifehy ny herinaratra, jiro ary fiarovana, ohatra. Eo amin'ny tendrony misy ny jiro ho an'ny fiaramanidina sy ny fitaovam-pikojakojana ny tilikambo rehetra io. Ny tendrony tsirairay dia misy tadiny 23 sy peratra misy peratra 14 misy savaivony samihafa.
Ny atin'ny tilikambo sy ny haingon'izy ireo dia milaza amintsika koa ny kolontsaina Silamo sy ny kolontsaina Maleziana amin'ny ankapobeny miaraka amina endrika, sary ary lamba haingon-trano. Ireo tilikambo manana ascenseur haingam-pandeha avo 29 heny, ascenseur enina ary ascenseur efatra mpanatanteraka. Ity farany, ho an'ny mpanankarena sy manan-kaja ihany, dia mitondra anao mivantana avy eo amin'ny toeram-piantsonana ambanin'ny tany ka hatrany an-tampon'ny tilikambo ao anatin'ny 90 segondra.
Ilay tetezana mampifandray tilikambo roa, ny Sky bridgeTsy afaka manadino momba izany isika, sariohatra io ary tetezana roa no mampifandray azy ireo eo anelanelan'ny rihana 41 sy 42. 58 metatra ny halavany ary mihantona 170 metatra ny haavony. Misokatra ihany koa izy hitsidihan'ny mpizahatany. Na dia tsy mbola naloa aza izany nanomboka tamin'ny 2010, dia aloa ny fidirana. Ho fanampin'izay, ity ny mpandinika hita eo amin'ny rihana faha-86 avy ao amin'ny Tower Two ary io dia azo alain'ny ascenseur avy amin'ilay trano mihitsy. Skybridge. Mahafinaritra ny fomba fijery.
Ahoana ny fomba hahatongavana any amin'ny Petronas Towers
Amin'ny lamasinina: azonao atao ny mandray ny fiaran-dalamby amin'ny tobin-tseritany rehetra ao anatin'ny faritry ny Lembah Klang ary mivoaka ao amin'ny gara KLCC.
amin'ny taxi: manana metatra fijanonana izy ireo ary avelany eo am-baravaran'ny KLCC Suria, ivon-toeram-pivarotana izay eo ambonin'ny lampihazon'ny tilikambo roa ary iray amin'ireo lehibe indrindra eto amin'ny firenena manana 140 metatra toradroa.
Andro: ny andro fitsidihana dia ny talata ka hatramin'ny alahady. Mihidy isaky ny alatsinainy sy amin'ny festival Hari Raya Aidifitri sy Aidiladha.
Ora: misokatra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 alina na dia mihidy aza manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 2:30 hariva ny zoma. Ny fidirana farany dia avela amin'ny 8:30 alina.
Tapakila. vidiana amin'ny ambaratonga Concourse ary manomboka mivarotra amin'ny 8:30 maraina izy ireo. Voafetra izy ireo ary azo vidiana mialoha amin'ny tranokalan'ny tilikambo. Ny vidin'ny olon-dehibe dia RM 80.00 ary izay mihoatra ny 62 taona dia mandoa RM 42.00.
Ankoatry ny ivon-toeram-pivarotana, ireo tilikambo dia manana aquarium anaty rano, ivon-toerana siantifika, galeriana kanto ary teatra ho an'ny orkestra philharmonic. Misy ihany koa ny KLCC Park fito hektara misy làlambe mandeha na mihazakazaka, loharano misy fampisehoana maivana, dobo ary kianja filalaovana.
Farany, Fa maninona no antsoina hoe Petronas Towers izy ireo? Fantatrao? Toa anarana renibeny i Petrona amiko ... fa tsy misy ifandraisany amin'izany. Tsy misy fandikan-teny satria izy fotsiny ilay endrika fohy amin'ny anaran'ny orinasan-tsolika nasionaly ao Malezia, Petroliam Nasional. Raha ny marina dia ny Tower One no mibodo tanteraka ny orinasa manana ny foibeny eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Kuala Lumpur » Ny Tilikambo Petronas
Inona no ho hita ao Zamora